Madaxweynaha Soomaaliya oo weeraray kooxaha Al-Qaacidda iyo ISIS. - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha Soomaaliya oo weeraray kooxaha Al-Qaacidda iyo ISIS.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Talaadadii shalay sheegay in kooxaha xagjiriinta ee Al-Qaacidda iyo ISIS ay yihiin ‘xoogag shar ah’ loona baahan yahay in laga hor-tago.
Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dalalka Reer Galbeedka ah ay adeegsadaan tallaabooyin isugu jira kuwa militeri iyo dhaqaale si loola dagaallamo argagaxisada.
Wuxuu caddeeyay in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay u hoggaansameen kooxda Al-Shabaab.
“Ugu dambeyntii, natiijadu waa mid isku mid ah: Waa xoog shar ah oo u taagan burburin, haddii ay wataan magaca Al-Qaacidda ama Daacish,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Associated Press.
“Magacyo hor leh ayay la baxayaan, balse ficilladooda, caqiidadooda waa isku wada mid in kastoo laga yaabo in midi ay ka arxan darran tahay kuwa kale.
Madaxweyne oo ku sugan Dubai oo uu uga qeybgalayo shirka ganacsiga Afrika, ayaa qiray in weerarrada sii kordhaya ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysaneyso Soomaaliya ay waxyeelleeyeen dadaallada lagu horumarinayo dalka.
Waa inaad gashaa si aad fikrad u dhiibato Gal
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDowladda KMG oo ka digtay qaraxyo horlehDAAWO VIDEO: Abdi Warsame Oo Meel Mariyey Qaraar U Qondayse Deeq Magaalada Bosaso.Daawo: Comedian AbdihakinBR riwaayadii Cuna Waraabaha .AMISOM: Ammaanka wadada aada Sh/Hoose.2 Somali men killed in Rice County crash; 4 deaths on icy Minnesota roads this week